Muuri News Network » Mid Ka Mid Ah ilaalada Xildhibaan Xusen Cali Xaaji oo Shalay si Kama ah ay xabad kaga fakatay….
Mid Ka Mid Ah ilaalada Xildhibaan Xusen Cali Xaaji oo Shalay si Kama ah ay xabad kaga fakatay….
Dhawaanahan ayeey ahayd markii Ciidamdamo ka tirsan Ilaalada Xildhibaan ka mid xildhibaanada Aqalka sare ay si Kama ah ay xabad kaga fakatay wade gaari oo marayay Aagga Dabka ee Wadada Maka Almukarama.
Marxuumka geeriyooday ayaa watay gawaarida raaxada ah; waxa uuna dhowr jeer gaariga kudhaweeyay tiknikada uu xildhibaanku saarnaa; ciidamda waardiyaha xildhibaanka ayaa damcay in ay xabad kor ugu ridaan balse askariga oo aad u qalqalay ayaa xabddu kaga fakatay.
Balse nasiib wanaag; masuuliyiinta kamadaba harin arintaaan oo waxa ay xiriir la sameeyeen islamarkaana raadiyeen ehaladii marxuumka iyagoo aad usoo dhaweeyay qadartana ku qancay.
Xildhibaan ka ayaa waxaa lagu magacaabaa Xuseen Cali Xaaji waxa uuna inoo cadeeyay in ay wadahadalada meel wanaagsan u marayaan dhaqan soomaalina iyo xeer toleed lagu soo dhameyndoono dhawaan.
Ciidamdan falkan geystay ayaa aad uga duwan kuwii hore ee Magaalada Muqdisha arintan ka geysanjiray; waxaa caada u ahayd in ay fakadaan oo aysan dib utixraacin reerka ay dhibka ugeysteen; balse ciidamdan ayaa muujiyay wanaag iyo soomaalinimo waxaana la filayaa in ay hadda ka dib ku dayandoonaan ciidamda militariga Soomaaliya.